11 kun oo hektar oo dhul ah ayaa la qorsheeyay in lagu shubo wareejinta beeraha - PotatoSystem
11 kun oo hektar oo dhul ah ayaa qorsheeyay inay galaan galaangalka beeraha ee dhulka hoostiisa laba sano gudahood
Saddex maal-gashi oo ka tirsan degmada Shatura ayaa qorsheynaya inay soo bandhigaan qiyaastii 11 kun oo hektar oo dhul ah muddo laba sano gudahood ah, sidaana waxaa sheegay xafiiska saxaafadda ee Wasaaradda Beeraha iyo Cuntada ee Gobolka Moscow.
"Degmadu, oo mashaariicda cusub laga fulinayo, waxaa booqday Wasiirka Beeraha iyo Cuntada ee Gobolka Moscow Andrei Razin," maqaalku wuxuu leeyahay.
Wasiirka wuxuu cadeeyay in mudo aad u dheer magaalada Shatura in 16 kun oo hektar oo dhul beereed ah ay ahaayen kuwo aan la adeegsan. Sannadkan, 11 kun ayaa isla markiiba bilaabay hirgalinta saddex mashruuc oo waaweyn oo maalgashi ah.
"Dunida waxaa ku hoos jira T.H. Shatursky" - mashruuc lagu dhisayo xarun caano leh oo loogu talagalay lix kun oo lo 'quudin ah, "Agroforvard" - mashruuc lagu dhisayo bakhaar qudaar ah oo gaaraya 16 kun oo tan iyo aqoon isweydaarsiga baradhada. Iyo sidoo kale shirkadda noolaha 'Biocomposite', oo qorshaynaysa inay beero miscanthus oo ay ka soo saarto saxamada la tuuri karo, "ayuu yidhi Razin.
Agrarib-ka habka adag ee gelinta dhulalka wareega oo aan la isticmaalin muddo dheer waxaa caawiya FSBI “Office of Special Melioiodkhoz”. Sannadkan shirkadda waxay mar horeba nadiifisay jidadka dib-ugu-celinta.
Waqtigan xaadirka ah, tractors, matoorrada, hargaha ayaa la diyaariyay wayna shaqeynayaan, gurina waxaa laga kireeyay mashiinnada mashiinnada sameeya. Mustaqbalka dhow, keenista qalab cusub oo beeraha ah ayaa la filayaa. Tani waxay kordhin doontaa sicirka meeleynta dhulka, ayuu yidhi Razin.
Dhammaan shaqada waxaa lagu fuliyaa kaqeybgalka firfircoon iyo taageerada Wasaaradda Beeraha iyo Alaabada Cuntada ee Gobolka Moscow.
Intii ay ku guda jireen socdaal shaqo oo ay ku tegeen beero la beero, waxay ka wada hadleen arrimaha taageerada gobolka ee shirkadaha wax soosaarka beeraha qayb ahaan magdhowga kharashaadka shaqooyinka dib-u-soo celinta dhulka. Shirkaduhu waxay heli karaan kaabis hektar kasta, laakiin tan waxaa loo baahan yahay in la diyaariyo dukumiintiyada la xiriira, ”ayuu wasiirku ku nuuxnuuxsaday.
Sida laga soo xigtay Razin, sidoo kale intii lagu guda jiray kulan ay la yeesheen beeralayda, waxaa looga wada hadlay hirgelinta tillaabooyinka kiimikada iyo farsamaynta burburka lo'da ee lagu soo rogay dhulalka lagu soo rogay wareegga beeraha.
"Waxaan ku dari doonaa sanadkii la soo dhaafay degmada Shatur, in kabadan 1,1 kun oo hektar ayaa lagu beero oo la galiyay wareegga beeraha, iyo guud ahaan in ka badan 5,3 kun hektar oo dhul ah sanadihii la soo dhaafay," ayuu madaxa waaxda gabagabeeyay.
Source: Maamulka Gobolka Moscow
Tags: gudida dhulkagobolka Moscowprocessing baradho